Sida kooxaha Telegram -ku u shaqeeyaan iyo sida loo sameeyo mid | Madasha Mobile
Cristian Garcia | 10/10/2021 18:39 | telegraam
Maanta waxaan haysannaa barnaamijyo fariin deg -deg ah oo aad u wanaagsan si aan awood ugu yeelanno inaan si joogto ah ula xiriirno wax dhibaato ah. Mid iyaga ka mid ah oo si gaar ah ugu badbaado badan waa Telegram. Telegram -ka waxaan ka heli doonnaa ikhtiyaarro kala duwan oo aan kula xiriiri karno, midkood waa kooxo. Sidaa darteed, haddii aad xiisaynayso inaad ogaato sida kooxaha Telegram u shaqeeyaan iyo sida loo sameeyo mid ha ka fogeyn shaashadda muddada maqaalkan, maxaa yeelay waxaad ku ogaan doontaa sida loo sameeyo daqiiqado gudahood. Aad bay u fududdahay oo haddii aad ku cusub tahay app -ka way kuu fiicnaan doontaa.
Habka ugu fiican ee lagu qariyo xiriiradaada WhatsApp
Haddii aan kuu sheegno inay kuu fiicnaan doonto, waa sababta oo ah si sax ah barnaamijkan halka asturnaanta ay jirto waxaa jira kooxo badan oo xiiso leh iyo kanaallo aad ku biirto. Waxa kale oo jira kanaallo laakiin taasi waa mowduuc kale oo aan si fudud u taaban doono haddii aad la kulanto mid, si aad u ogaato farqiga. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii barnaamijkaaga farriimaha deg dega ah uu yahay Telegram iyo waxaad rabtaa inaad abuurto kooxo wax walba leh iyo cidaad rabto, waxaad baran doontaa inta lagu jiro sadarka soo socda. Sababtaas awgeed, iyo iyada oo aan la sii dheereyn, waxaan halkaas u aadi doonnaa casharro ku saabsan kooxaha Telegram.
Farqiga u dhexeeya kooxda iyo kanaalka Telegram
Sidii aan nidhi, haddii aad la kulanto labadan nooc ee "kooxaha" ee ka jira Telegram, waxaan sharxi doonnaa waxay ku saabsan tahay. Waxay noqon doontaa mid kooban maadaama aysan ahayn ujeeddada maqaalkan laakiin waxay maskax ahaan ku meejin doontaa si aad u ogaato waxa aad abuuri karto, akhrin karto oo aad ku adeegsan karto appka fariimaha deg dega ah, Telegram.
Kooxaha waxaa abuuri kara dhammaan isticmaaleyaasha, si ay ugu bilaabaan. Oo qof kasta oo ka tirsan kooxda Telegram wuu faalloon karaa oo ku dari karaa wax kasta. Waxay noqon doontaa mid ay heli karaan dhammaan xubnihiisa qof walbana wuxuu awoodi doonaa inuu akhriyo waxa la daabacay marba haddii uu ka yimid adeegsadayaasha gudaha ku jira. Laakiin haddii aan tagno kanaalada waxaa jira farqi aad u weyn oo aan gadaal ka sharxi doonno.
Kooxda Telegram -ka waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku martiqaado xubno badan inay ka qaybgalaan, taas oo ah, haddii aad abuurto koox qoys, waxay had iyo jeer awood u yeelan doonaan inay ku sii biiraan xubnaha qoyska. Khasab kuguma aha inaad hayntaada ku darto liiska xiriirkaaga, oo aadan arkin 15 sano.Markaad leedahay nickkeeda, waxaad awoodi doontaa inaad ku martiqaado. Isla xubnahani waxay awoodi doonaan inay beddelaan magaca, muuqaalka iyo astaamaha kale ee kooxda si ay u gaaryeelaan. Tani waa wax tusaale ahaan WhatsApp -ku aad ugu kooban yahay maamulaha kooxda.
Haddii aan tagno kanaalada, sidaan filaynay aad bay u kala duwan yihiin. Taasi waa in la yidhaahdo, kanaalku waa meel aad ka heli doonto macluumaad, guud ahaan mawduuc Laakiin sinaba uma awoodi doontid inaad ka jawaabto haddii aadan ahayn maamulaha kanaalka. Badanaa waxaa loo adeegsadaa kanaalada macluumaadka, tusaale ahaan: dalabyada ciyaarta fiidiyaha, dalabyada teknolojiyadda, saxaafadda maalinlaha ah, siyaasadda, shaqada iyo mowduucyo kale oo badan oo si fiican ugu habboon kanaal ahaan.
Sidaa darteed farqiga ugu weyn ayaa ah en koox Telegram ah waxaad awoodi doontaa inaad ku hadasho haddii aad tahay maamule iyo haddii kale oo aad habayso wax walba oo kanaalka Telegram kaliya maamulayaasha ayaa daabaca waxyaabaha ku jira. Kaliya waxaad ka falcelisaa waxa ku jira ama mararka qaarkood, waxaad furi kartaa liis jawaabaha nuxurkaas ah oo aad kula faalloon karto isticmaaleyaasha kale jawaab ahaan waxa ku jira maamulka. Waxaa jira wax kale oo yar oo aad samayn karto. Taasi maahan sababta kanalku u joojiyo xiisaha, runtii waa mid ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan ee barnaamijka Telegram. Laakiin waxaan danaynaynaa inaan ogaano sida loo abuuro koox taasina waa waxa aan hadda u soconno.
Sida loo abuuro kooxaha Telegram
Aan u tagno waxa aad xiisaynayso, abuuro kooxda Telegram -ka illaa hadda. Sidaa darteed, raac talaabooyinkan aan hoos ku siin doonno oo aad si fudud ku gaari doontid:
para abuuro kooxaha Telegram waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa furitaanka arjiga (sida iska cad). Hadda waa inaad joogtaa shaashadda weyn oo guji astaanta qalinka buluugga ah ee aad ka heli doonto xagga hoose, geeska midig ee shaashadda. Asal ahaan waa astaanta aad riixi doonto goormaad rabtaa inaad bilowdo hadalka oo leh qof ka socda Telegram Hadda waxay kuu diri doontaa shaashad - menu halkaas oo aad ka heli doonto xulashooyin kala duwan, laakiin haddii aad eegto xagga hoose, xiriiradaada mobilada ayaa waliba soo muuqan doona.
Waa isla halkaas oo ay tahay inaad gujiso ikhtiyaarka 'Kooxda cusub0 waxaadna bilaabi doontaa geedi socodka shaashadda oo dhan si aad u abuurto kooxda Telegram -ka cusub. Hadda waa inaad mid mid ugu darto dhammaan isticmaaleyaasha aad rabto inaad ka mid noqoto kooxda. Sidoo kale xagga sare ee shaashadda taleefankaaga waxaad ka heli doontaa xiriirada. Hadda waan ogahayHaddii aad hore u dhamaysay ku darista dhammaan xiriiradaan, waa inaad gujisaa 'V' ama hubi in aad ku yeelan doonto midigta sare si ay kuu gayso shaashad kale oo habayn ah.
Waxaan ku dhownahay inaan dhammeyno, hadda waa inaan habeynnaa kooxda taasna waa inaad ku riixdaa astaanta kaameeraha si aad u doorato sawirka aad rabto inaad goobjoog u ahaato sida avatar -ka kooxda. Waxaad gujin kartaa magaca kooxda si aad u qorto magaca kooxda ee aad maskaxda ku hayso, hubi in uu yahay mid asal ah oo indho qabad leh, xubnaha intiisa kale ayaa jeclaan doona. Markaad intaas oo dhan dhammayso oo aad dhammayso habayntii waxaad awoodi doontaa inaad mar labaad ku xaqiijiso V -ka ama hubiso kooxda Telegram -na waa la abuuri doonaa oo la bilaabi doonaa. Dhammaan xiriirada waxaa lagu dari doonaa hal mar waxaana lagu wargelin doonaa inay ku jiraan koox cusub oo ku jirta barnaamijka. Waxay hadda qori karaan, akhriyi karaan oo diri karaan waxay doonaan.
Uma baahnid inaad maamusho kooxda oo dhan, waxaad abuuri kartaa maamuleyaal badan, yacnii, dooro dadka aad doonayso inay awoodaan inay ku casuumaan in badan oo ka mid ah xiriirkooda ama haddii aadan dareensanayn inaad ka taxaddarto, waxaad mar walba weydiisan kartaa naanaysyo oo adigu dhammaantoodba martiqaad.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani adiga ku anfaco oo wixii hadda ka dambeeya aad taqaan sida loogu biiro kooxaha Telegram -ka iyo waliba farqiga u dhexeeya iyaga iyo kanaalada. Wixii su'aalo ah waad ku dhaafi kartaa sanduuqa faallada. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobile -ka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » Sida kooxaha Telegram u shaqeeyaan iyo sida loo sameeyo mid
Daaqadaha ma buuxin kareen qaabka: maxaa la sameeyaa?